Oovimba abagcina iincwadi zakudala
Ripple vs SEC: I-SEC Iimpikiswano ezichasene nezohlwayo kunye nokuGqithiselwa kwe-DPP
Kwi-Ripple eqhubekayo ngokuchasene ne-SEC edabini lomthetho, i-SEC kutshanje ifake inkcaso ngokuchasene nesindululo sabantu abachasayo. IKhomishini iqinisekisile ukuma kwayo ngokuchasene nokufunyanwa kwamaxwebhu angaphakathi kunye ne-arhente akhuselweyo yi-DPP.
I-SEC ibongoze inkundla ukuba ingagqithi ngaphezulu kwaye yohlwaye iinzame zikarhulumente, kugxininiswa kwisimangalo seXRP. Iarhente iqaphele ukuba idatha yangaphakathi, yangaphambi kokuthatha isigqibo, kunye nengxoxo yeza ngabamangalelwa abangabaziyo. Oko kwathethi, umzimba olawulayo uphawula ukufunyanwa kwedatha kwisicelo esivela kwi-Ripple njengengabalulekanga kumabango okanye kukhuselo olwahlukileyo kulomthetho.
Ngeli xesha, iKhomishini yoKhuseleko kunye noTshintshiselwano ithi sele ivelise amaxwebhu abalulekileyo abamangalelwa. Nangona kunjalo, ummangalelwa-u-Ripple- utyikitye obona bungqina bubalulekileyo, okt, ubungqina bokubekwa kwalowo wayesakuba liCandelo loMlawuli wezeziMali we-SEC uWilliam Hinman ukuba wadibana nabameli beRipple.
U-Hinman ubanga ukuba ubalumkisile abatyholwa ukuba ukuthengisa kwabo i-XRP kukuthengisa kwezokhuseleko, wongeza ukuba ucebise uRipple ukuba ayeke ukuthengisa okungabhaliswanga.
I-SEC ithi izizathu zommangalelwa ezisishukumisayo kwisindululo sokungabinangxaki kwe-Arhente yeNkqubo yokuDala Akukho ngqiqweni. ” Kananjalo, iarhente ilindele inkundla ukuba isiphose ngaphandle isicelo sabamangalelwa sokuveza idatha engeyoyaseburhulumenteni kunye nelungelo le-SEC.
Amanqanaba aphambili eRipple ukuba abukele-Agasti 18
I-XRP iphakathi kolungiso olubukhali ukuya kwinqanaba le- $ 1 njengoko i-cryptocurrency ijolise ekunciphiseni iimeko zokuthenga ngaphezulu. Nangona kunjalo, ukwehla kungaphela kungekudala njengoko iimeko zorhwebo zibuyele kumanqanaba angathathi hlangothi, ngokusekwe kwisalathiso seyure ye-4 ye-MACD.
Oko kwathethi, silindele isaphulelo kwiiyure ezizayo ukuya kwinqanaba leedola i-1.2000, unikwe elo xabiso lihlala ngaphezulu komgca we-50 SMA. Ngelixa ukuhla ngakumbi kungenakulindeleka, ikhefu elingaphantsi kwe- $ 1 uphawu linokuphazamisa iinzame zokubuyisela kwimeko yesiqhelo kunye nokunyusa uxinzelelo lwe-bearish.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.1500, $ 1.2000, kunye ne-1.2700, kwaye amanqanaba ethu enkxaso ayi- $ 1.1000, $ 1.0500, kunye ne- $ 1.0000.
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 51.7 billion
Ukulawula kweRipple: 2.61%
I-Ark Invest Joins Race yokuqalisa i-Bitcoin First ETF e-US
Inkampani eyaziwayo yotyalo-mali i-Ark Invest isandula ukubhengeza ukufakwa kwe-Bitcoin ETF kwi-SEC. Ifemu ityhile ukuba idibene ne-21Shares kwi-ETF yayo ngenxa yamava ayo kule ndima.
I-ETF ye-BTC ecetywayo iya kudweliswa njenge-ARK 21Shares Bitcoin ETF. I-ETF ecetywayo iya kulandelela intsebenzo kunye nexabiso le-benchmark, inikeze ukubonakaliswa kwe-BTC kwiimarike ezilawulwayo.
Ngelixa i-Bitcoin ihleli kumjikelo wokubopha ixesha okwangoku, imali esekwe kwi-crypto kunye neengcali ziqikelela ispike kwimfuno kunye nexabiso kungekudala. UCathie Wood, umseki wenkampani yotyalo-mali, ngumlandeli omkhulu weBitcoin, kwaye uninzi lweeArk zihlala kwiinkampani ze-crypto ezinje ngeCoinbase kunye neBitcoin uqobo.
Kutshanje uWood uxele kwangaphambili ukuba iBitcoin inokubetha i-500,000 yeedola ngenxa yeepropathi zayo ngelixa ivuma ukuba kungathatha ixesha ukuba esi siprofetho sizalisekiswe xa sinikwa imeko yentengiso.
I-Ark Invest's Bitcoin ETF yokuFayila iza phakathi kwe-SEC Ukungakhathali
I-Ark Invest iye yaba yinkampani yakutshanje yokufaka isicelo se-BTC ETF kulo nyaka kuphela. Ezinye iinkampani ezilindele ukuvunywa kwe-Bitcoin ETF zibandakanya iGlass Digital, VanEck, Fidelity, SkyBridge Capital, NYDIG, WisdomTree Investment, kunye neBitWise. Ikhomishini yoKhuseleko kunye neKhomishini yoTshintshiselwano yaseMelika kusafuneka ivume nayiphi na kwaye ilibazisile ukunika isigwebo kwezinye.
Ngeli xesha, uSihlalo we-SEC uGary Gensler uqinisekisile ukuba icandelo le-cryptocurrency lisafuna ubume bolawulo. Usihlalo kutshanje uthe:
"Le yinto eguquguqukayo umntu angathi ingazinzanga kakhulu, udidi lweeasethi kwaye uluntu olutyalayo luza kuxhamla kukhuseleko lwabatyali mali ngakumbi kutshintshiselwano nge-crypto."
Oko kwathiwa, abahlalutyi kunye neengcali bayathandabuza ukuba kunokwenzeka ukubona ukuvunywa kwe-ETF ye-BTC kulo nyaka. I-SEC ithi uninzi lweengxaki eziqaqambisile kwiBitcoin, kubandakanya ukungazinzi kwexabiso kunye nokusetyenziswa gwenxa kweemarike, kudala zisekhona.
Nangona kunjalo, abaphathi beeasethi baya kuqhubeka nokudibana nethuba lokumilisela i-BTC ETF yokuqala e-US.
tags Tyala iTyeya, ET Bitcoin ETF, Cryptocurrency, iindaba, sec
Ripple vs SEC: IKhomishini iseti ekucinezeleni isicelo seRipple Deposition
I-US Securities and Exchange Commission (i-SEC) izimisele ukufaka isindululo ngomso ukucinezela ukubekwa phantsi kwesicelo esikhutshwe yiRipple Labs kwigosa langaphambili le-SEC.
Isindululo sokucinezelwa sokutyhalwa yiKhomishini siza njengoko i-SEC isitsho ukuba ukubuzwa kwalowo wayesakuba ligosa phantsi kwesifungo kwakungamkelekanga. Oko kwathiwa, isigqibo sokuba owayesakuba ligosa le-SEC uza kubuzwa imibuzo okanye hayi sixhomekeke kwiJaji kaMantyi uSarah Netburn.
I-SEC vs. I-Ripple (XRP) Ityala libone ukujija okuninzi kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Ngelixa omabini la maqela esithi abambe indawo ephezulu yokuziphatha, ityala alikapheli. Ngalo lonke eli tyala, iindibano ezininzi ziye zaxhasa i-Ripple ngelixa bambalwa bethanda i-SEC, ngaphandle kokuba i-SEC ibonakala ngathi inetyala elinamandla. Ngexesha elithile, kwabonakala ngathi i-SEC yayiza kubiza.
Nangona isazisi segosa elicetywayo ukuba libuzwe imibuzo alikaziwa, amalungu amaninzi oluntu lwe-cryptocurrency aqikelele amagama amaninzi anokubakho, ngombono oxhaphakileyo ngowokuba yayiyintloko ye-SEC uJay Clayton. UClayton unoxanduva lokuqalisa ityala le-SEC ngokuchasene neRipple ngoDisemba 2020, ngeentsuku zokugqibela eziya kwiKhomishini.
Abanye baphikise ukuba uClayton ucace gca ekujoliseni kwaye uRipple uza kulandela elinye igosa elaligxothwe kwangoko kwiarhente.
Amanqanaba aphambili e-Ripple ukuba abukele-nge-23 kaJuni
I-Ripple, kunye neninzi yemakethi ye-cryptocurrency, iphakathi kwesaphulelo esivela kukuwa kweemarike kutsha nje. I-XRP ngoku ithengisa ngaphantsi kwe-0.6500 yokuxhathisa, kulandela ukuwa kwinqanaba le-0.5200 izolo.
Oko kwathethi, ekujolise kuko kwangoko kweenkunzi zeenkomo kukunganyaniseki kwe- $ 0.7800, isikhundla siphezulu sejelo lethu elihlayo. Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 0.7800 yokuchasana inokuphikisana nokuchaphazeleka kwe-bearish. Nangona kunjalo, abathengi kufuneka bahlale belumkile, njengoko i-cryptocurrency ingekho ngaphandle kwehlathi.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 0.6500, i- $ 0.7000, kunye ne- $ 0.7500, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 0.6000, $ 0.5200, kunye ne- $ 0.4600.
Imali iyonke yentengiso: $ 1.3 zezigidi
Uqoqosho lweRiple capitalisation: $ 29.4 billion
Ukulawula kweRipple: 2.17%